Xhumana - the yafuna kakhulu uhlelo ukudlulisa imali. Ngenxa wakhe, ungathumela imali ngokushesha futhi ngokuphephile kuphi emhlabeni. Esikhathini kohlelo lamazwe omhlaba amagatsha 85.000, okuyinto zitholakala kude futhi eduze phesheya. Nokho, izakhamuzi eziningi umbuza ukuthi ungathola kanjani ukuhumusha "Imininingwane" lapho ibhange nalokho okudingekayo.
Indlela yokuthumela imali
Ukuze uthumele imali, noma eziseduze, kumele wena:
Vakashela ehhovisi inkampani wezimali eyenza ukudluliselwa nge Imininingwane uhlelo.
Preyavit ipasipoti abasebenzi.
Nikeza Uchwepheshe Imininingwane yinkampani yezezimali umamukeli: igama eliphelele, ukuthumela ezweni, lwemali wathola, lemali okumele kuthunyelwe nemininingwane yokuxhumana.
Ukuze ubhalisele isitatimende ukudluliswa kweemali, ngemva kokuhlola yonke imininingwane yakho siqu, ukuze ube nengxenye cashier bese uthola irisidi.
Indlela ukuthola ukuhumusha
Ukuhumusha, kufanele wenze lokhu okulandelayo:
Vakashela iphuzu eliseduze kwezidingo yezinguqulo. Yamahhala hotline kohlelo lokukhokha zingatholakala, lapho ibhange bangathola ukudluliselwa "Imininingwane".
Passport noma omunye umbhalo, okuyinto likhona isibindi omazisi.
Umsindo esiphezulu sezimali lezi ikhodi inkampani kanye nenani eliqondile ukundlulisa.
Ngena ngemvume isicelo kanye zokuqaleka ukushelela.
Thola imali esandleni.
Imali uhlelo ukudlulisa "Imininingwane"
zingeqedwe ku inani ukudluliswa kulo lonke Russian Federation. Njengoba for izimali zakwamanye amazwe, bese uhlelo ubeka imingcele - akukho kuka 5000 zamadola ukudluliswa ngosuku olulodwa.
Ukuthumela ukuhunyushwa wenziwa ruble. Kulokhu, umthumeli ungenza ukuguquka noma yibuphi irisidi lwemali.
Ungakhohlwa mayelana Ikhomishana, icala umthumeli. Inani ikhomishana iqinile futhi usethe amazinga kohlelo yemali, futhi ubukhulu bawo incike lemali adlulisiwe.
Ukuhumusha Ukubhalisa kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-5 isikhathi. Ngokushesha ngemva kokumukisa umamukeli angafaka isicelo ehhovisi eliseduze futhi ukuthola imali.
Translations "Imininingwane" eMoscow
E-Moscow, ukudluliselwa ohlelweni lokukhokha athandwa kakhulu. E-Moscow 396 amaphuzu, lapho ungakwazi kokubili ukuthumela nokwamukela wokuhumusha. Ungaba udumo futhi zezimali zikhungo ukusizakala amasevisi kohlelo: ibhange "Metropol", URALSIB, GLOBEXBANK, "BIN", "Imfundo" futhi "Loco Bank".
Ngaphansi kwemibandela ye-uhlelo lokukhokha, uma izimali kungukuthi etholwe esiyizinsuku ezingu-30, ukudluliswa ebuyiselwa emuva ibhange lomthumeli. Kulokhu, imali ukudluliselwa ikhokhiswe. Njengomthetho, ukuhumushwa wabuya ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Umamukeli akazi lapho ibhange ungathola ukuhunyushwa "Imininingwane".
Uma uthumela iphutha idatha yomuntu siqu, futhi umthumeli akezi egatsheni yasebhange ukuwalungisa.
Uma wenza iphutha ngesikhathi kuthunyelwa ukudluliswa, kumele wenza izinguquko ezifanele, ngaphandle kwalokho umamukeli ngeke ukwazi pick up the imali ethunyelwe. Ukuze wenze izinguquko, kufanele uhlinzeke isiphathimandla ipasipoti izinkampani zezimali, uma sibala ezimbalwa yokudlulisa bese ubhala isitatimende. Isitatimende kufanele ahlinzeke imininingwane lokho kudingeka izinguquko.
Ngemva ukuchibiyela umamukeli ngokushesha zisebenza emnyangweni, okuyinto ibambisane lokhu ohlelweni lokukhokha futhi wamukele imali.
Ngenxa ukudluliswa kwemali uhlelo lokuxhumana, noma ubani angaba ngokushesha ukuxazulula izinkinga zezimali bomdabu noma kothandekayo ngokuthumela imali. Lapho ethumela inkampani onguchwepheshe, ungahlala ucacise lapho ibhange ungathola ukuhunyushwa "Imininingwane", nokubika ulwazi umamukeli.